Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee Finland oo ka qayb gashay bandhig aad uwayn oo layidhaahdo The World Village Festival.
Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee Finland oo ka qayb gashay bandhig aad uwayn oo layidhaahdo The World Village Festival.
Posted by Daljir	/ May 30, 2016
Magaalada Helsinki ee caasimada wadanka Finland waxaa maalinimadii sabtida ooy taariikhdu tahay 27/5/2016 kafurmay bandhig aad uwayn oo layidhaahdo The World Village Festival kaasoo sanad walba halmar xilligan oo kale kadhaca wadanka Finland. Bandhigan ayaa socday mudo labo maalmood ah. Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee wadanka Finland ayaa sanadkan ka qayb-gashay bandhigan ama Festival-kan. Jaaliyadda ayaa soo bandhigtay cuntooyinka iyo ciyaarta hiddaha iyo dhaqanka Somalida Ogadenya ooy kamid tahay Ciyaarta Dhaantada.
Waxaa xusid mudan in goobtii jaaliyaddu ay kulahayd bandhigan ay aheyd mid kamid ah meelaha loogu xiisaha badnaa ee dadku ay hor-buuxeen. Ciyaarta hiddaha iyo dhaqanka Somalida Ogadenya ee Dhaantada ooy ciyaarayeen wiilal iyo gabdho dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar aad uqurux badan oo ah dharka dhaqanka Somalida Ogadenya ayaa soo jiitay dareenka dadkii isugu soo baxay Festival-ka oo aad uga helay isla markaana aad uxiisaynayay ciyaarta Dhaantada ah ee dhalinyaradu ay soobandhigeen.
Jaaliyada Finland oo ujeedada ugu wayn ee ka qayb galka badhigan ayaa ahayd sidii dadwaynaha isugu yimid halka oo lagu qiyaasay 80,000 oo qof ugu gudbin lahayd qadiyada Ogaadeenia, Taas oo u suurto gashay jaaliyada ILAAHAY idankiis. Waxaad arkaysa goobta ay halkaas jaaliyadu ku lahayd oo dadwayne farabadan hor tubnaayeen iyagoo la sheekaysanaya bxubnaha jaaliyada iyo dhalinta OYSU oo u qaybinayey waraaqo ka turjumiya tacadiyada ay dawlada Itoobiya ku hayso shacabka Ogaadeenia isku soo duub oo galabnimadii axada aya halkaa lagu soo badhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida Ogaadeenia oo sii jiitay dhamaan dadwaynihii halkaa isugu yimid.
Guulwade ONA Helsinki.